Nyefee music si iPhone / iPad / iPod ka iTunes
Nyefee Music Site iPhone / iPad / iPod ka iTunes
Mepee akara ngosi nke TunesGo ugbu na PC gị na site abụọ tapping na ya na a a ihuenyo dị ka nyere n'okpuru ga-apụta.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ iOS ngwaọrụ
Ugbu a ị chọrọ jikọọ gị iOS ngwaọrụ (iPhone, iPad ma ọ bụ iPod) gị na PC na n'ihi na nke a na-USB na jikọọ na otu mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri ngwaọrụ gị na ndị ọzọ na ndị USB n'ọdụ ụgbọ mmiri nke gị usoro. Ozugbo ejikọrọ ihuenyo dị ka n'okpuru ga-apụta na ngwaọrụ aha na dịnụ nhọrọ. (Ihuenyo gbaa nyere n'okpuru bụ maka iPhone, iPad na iPod karị)
Nzọụkwụ 3. Mma songs
Ugbu a ị chọrọ iji họrọ songs site na ngwaọrụ gị na ị chọrọ nyefee gị iTunes n'ọbá akwụkwọ. N'ihi na nke a, pịa nhọrọ nke "Music" bụ nke ugbu na menu n'aka-ekpe n'akụkụ nke ihuenyo.
Ugbu a ị chọrọ iji họrọ songs na ị chọrọ site na ngwaọrụ gị ga-agafere iTunes. Nanị họrọ checkbox maka songs na mkpa ka ị họrọ. (The ihuenyo ogbugba maka songs họrọ na iPhone, iPod na iPad karị e nyere n'okpuru) The igbe na-acha uhie uhie edoghi na-akara maka ngwaọrụ na songs họrọ.
Ugbu a, mgbe na-ahọpụta ndị song gaa n'elu ụlọ mmanya nke TunesGo na n'okpuru "Export Iji" taabụ họrọ "Mbupụ na iTunes Library" nhọrọ. (The ihuenyo gbara na-acha uhie uhie gosi e nyere n'okpuru)
Nzọụkwụ 6. Export ịga nke ọma
Ugbu a dị ka songs na-exported ka itunes n'ọbá akwụkwọ ha ga-apụta n'okpuru Music taabụ ugbu na n'aka ekpe nke TunesGo n'ụlọ peeji. (Mbụ ihuenyo ogbugba na-egosi na mbụ efu iTunes n'ọbá akwụkwọ enweghị ihe ọ bụla track na mgbe ahụ ndị na 4 songs enyefere iOS ngwaọrụ).
Ọzọ: iPhone / iPad / iPod ka PC / Mac